University of Bayreuth - Waxbarashada Sare ee Germany
gaabinta : UB
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Bayreuth
Qor at University of Bayreuth
Ku soo dhawaada Jaamacadda Bayreuth. Fikirka iyo ka hawlgala caalamka oo dalbaday in ka badan isagoo kaliya mid ka mid ah jaamacadaha ugu soo jiidashada badan ee Bavaria iyo Gumaysiga jagooyinka sare ee cilmiga qaranka iyo qiimeynta cilmi. Sababtan awgeed, waxaan dhigay bartilmaameed horumarinta ee sannadka 2020 si ay u sii afaysto Jaamacadda profile gaar ah Bayreuth iyo laayeen tartan:
Thanks to ay soo diyaariyeen kala duwan ee nidaamo iyo meelaha diiradda istaraatiiji doortay, Jaamacadda Bayreuth waxaa caalamka looga aqoonsaday ku darsaday cilmi iyo waxay bixisaa jawi aad u fiican oo waxbarasho.
The University of Bayreuth waa mid ka mid ah meelaha ugu fiican Germany marka la eego deegaanka ay waxbarasho iyo heerka ardayda.
The University of Bayreuth waa jaamacad campus dhexdhexaad ah oo waxaa ka go'an in heerarka waxbarasho ee ugu sareeya kaas oo uu sameeyay dadaal miyir qabo in ay gooni ka dhigay jaamacadaha waaweyn.
Sida mid ka mid ah jaamacadaha ugu da'da yaraa ee Germany, innagu waynu karaynaa inaynu ka hawlgalaan eex ah, ruux is-kalsooni ku xoriyadda aqoonta, horumarka sayniska, iyo masuuliyadda bulshada. Iyadoo la himiladeena, mudnaanta sare jira kormeer shaqsi, dayactirka tacliin heer sare ah, iyo in la abuuro barnaamijyo waxbarasho oo qaadan cilmi baadhista hada la tixgelinayo. Arrinta aan diiradda saarno maadooyinka iyo iskaashiga cusub oo u dhexeeya badan oo nidaamo waa qaababka ugu muhiimsan ee dhaqanka cilmi Bayreuth ee.
taas dib loo eego, haatanna waa cad sida miyir waxa uu ahaa ku soo laabtay 1975 in la dhiso jaamacad ku salaysan isku maaddooyinka xoog leh cilmi maadooyinka iyo cilmiga. Su'aaluhu waxay u jeedday xagga bulshada caalamka waxa ay noqonayaan dheeraad ah iyo in ka badan oo adag. Jawaabaha midig oo keliya waxaa laga heli karaa iyada oo ku dhow, iskaashiga cross-anshax - mid ka mid ah hantida ugu weyn ee Jaamacadda ee. The University of Bayreuth waxa lagu gartaa xoriyadda aqoonta, horumarka sayniska, iyo ku tacaluqa wax ku ool ah, kuwaas oo dhammaantood la fahamsan yahay in macnaha guud ee mas'uuliyadda ka saaran bulshada iyo dhaqanka.
Ku soo dhawow naga mid-of-a-nooc campus.
Waa labada qalbiga University iyo il rajo. Waa meesha saaxiibtinimo la sameeyey, iskaashiga waxaa curin, iyo fikradaha waa uuraysatay, hubinta in jaamacadda weli tiir ka mid ah hal-abuurnimo. sarrifka Sayniska wayn bay tartaa ka duwan badan oo nidaamo our campus xiriirka isu keentaa. Taasi waa sababta ay u badan tahay Jaamacadda Bayreuth waxa ay awood u dabaal abaalmarino badan oo sharaf iyo waayo guulaha ay scholarly.
Dunida waa tuulo
... Iyo Bayreuth bartamaha ku yaalla. Iyada oo dadweynaha ka mid ah agagaarka 73,000, Bayreuth ma aha gaar ahaan ballaaran, laakiin taasi waa mid ka mid ah waxyaalihii uu ka dhigayaa si rafcaanka. Dadka ordi mid kale. Magaalada waxaa laga yaabaa in caansan dunida ee ay iidda opera sanadlaha, laakiin waxa ay ardayda iyo cilmi sidoo kale waxay bixisaa badan oo soo jiidashada dhaqanka iyo farshaxanka, Wagner gees u. Waa u yimid sida la yaab ma laha in goobaha xisbiga iyo baar magaalada ayaa si adag in gacmaha ardayda. Laakiin waxaad noqon doontaa yaabay sida deg deg ah aad awoodo aad u ogaato habka agagaarka sida aad ku aragto xuduudaha u dhexeeya xarunta campus iyo magaalada noqday ka yar iyo wax ka yar arki karo. Tani kaliya waxaa laga yaabaa sababta oo keliya muddo gaaban ka dib markii uu jiro wajiga la yaqaan on rukun kasta.
Location waa wax walba.
Muuqaal dabiici ah waqooyiga Bavaria, Midigtaadana waxaa ku ag marinkeeda Bayreuth ee, waa ku weyn yahay, waayo hawlaha isboortiga: baaskiil, tug, buur-fuulitaanka, laashash, aqado, iyo barafka ayaa dhamaantood siyaabo aad u fiican si loo kobciyo waqtiga firaaqada aad. Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan ku dhici jamasho dareento magaalada weyn hadda ka dibna, Nuremburg waa uun tareen kortaan hal saac oo marti iyo Munich yahay kaliya 2 ½ saacadood. Waxaad gaari karo Berlin ee 4 saacadood baabuur by, Leipzig ee wakhti badhkiis in. Ha iloobin: iyagoo qalbiga Europe macnaheedu waa Prague sidoo kale waa kaliya drive saddex saacadood ah iska.
xisaabta, Physics iyo Sayniska Kombiyuutarka
Biology, Chemistry iyo Earth Sciences
Law, Ganacsiga iyo Dhaqaalaha
Luqadaha iyo Suugaanta
Ma rabtaa wada hadlaan University of Bayreuth ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Bayreuth rasmiga ah Facebook
University of dib u eegista Bayreuth
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Bayreuth.